Articles - Nurture Preschool | International Standard Integrated Preschool
ကလေးတို့လုံခြုံရေးနှင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကာကွယ်နည်း အမျိုးမျိုး
အခုတစ်လော ‘ကလေးပျောက်လို့’ ဆိုတဲ့အသံတွေကို မကြာခဏကြားနေရပါတယ်။ ကလေးတွေကိုရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးနဲ့ ဖြားယောင်းပြီးတစ်သွယ်၊ လိမ်လည်ပြီးတစ်မျိုး၊ ခြိမ်းခြောက်လို့တစ်ဖုံနဲ့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့လူတွေရဲ့ရန်က တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန် ကိုယ့်ကလေးဆီကို ရောက်လာလေမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေ မိဘတွေရင်ထဲမှာ ဖြစ်နေကြမှာပါပဲ။ အန္တရာယ်တွေမကျရောက်အောင် မိဘတွေကလည်း ကလေးတွေကို တတ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းတွေနဲ့ အစွမ်းကုန်ဂရုစိုက် ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးကိုအချိန်တိုင်း၊ အချိန်တိုင်း ကိုယ့်မျက်စိအောက်မှာ ထားဖို့ဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မိဘတွေရဲ့ မျက်ကွယ်ရာမှာ ကလေးတွေရဲ့ လုံခြုံမှုအတွက် ဘယ်လိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားကြမလဲဆိုတာ ကြိုပြီးစီစဉ်ထားသင့်ပါတယ်။ ပြင်ဆင်ထားနိုင်တာတွေက……… ၁။ ကလေးရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းကို အမြဲပြင်ဆင်ထားပါ ကလေးပျောက်သွားတယ်ဆိုတာ သိလျှင်သိချင်း ချက်ချင်းလုပ်ရမှာက သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းကို အကြောင်းကြားခြင်းပါပဲ။ မြန်လေကောင်းလေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာ အမြန်ဆုံးကစပြီး ရှာဖွေလို့ရအောင် ကလေးရဲ့ဓာတ်ပုံ၊ ပုံပန်သဏ္ဏာန်နဲ့ ထူးခြားချက်တွေကို ရေးထားတဲ့ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတစ်ခုကို အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ထားပါ။ အဲဒီမှတ်တမ်းမှာ ကလေးရဲ့ ဆေးကုသမှုမှတ်တမ်းက အချက်အလက်တွေပါ ပါဝင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒီမှတ်တမ်းတွေကို ကလေးထိန်းပေးသူ မိဘနဲ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာ အဆင်သင့်ဆောင်ထားပါ။ တစ်ခုခုဖြစ်လာရင် အဲဒီမှတ်တမ်းကိုယူပြီး အကြောင်းကြားပါ။ ကလေးရဲ့ဓာတ်ပုံပါတဲ့ ကတ်ပြားငယ်တစ်ခုကိုလည်း သွားလေရာ အမြဲသယ်သွားပါ။ ဓာတ်ပုံနဲ့ အချက်အလက်တွေကို တစ်နှစ်တစ်ခါအသစ်ပြန်လုပ်ပါ။ ၂။ ကြုံတွေ့နိုင်ချေရှိသော လိမ်လည်မှုများကို ပြောပြထားပါ ဖြားယောင်းခေါ်ဆောင်သူတွေ အများဆုံးသုံးတတ်တဲ့ လိမ်လည်နည်းတွေကို ကလေးကိုပြောပြထားပါ။ ကလေးတွေကို ခေါ်သွားဖို့ ကြိုးစားသူတွေက အရင်ဆုံးသူတိုိ့ကို လက်ခံယုံကြည်လာအောင် လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုလုပ်တဲ့အခါ ပြောတတ်ကြတဲ့စကားတွေက…. မိဘတွေကခေါ်ခိုင်းလိုက်တာ ပျောက်နေတဲ့ခွေးလေးကို ကူပြီးရှာပေးပါ လမ်းမှားလာမိလို့ လမ်းမှန်ကိုပြောပြပါ စသည်ဖြင့်ပြောတတ်ကြပြီး ...
မိသားစု လက်ဆုံစားရတဲ့ ထမင်းဝိုင်းလေးက ပျော်စရာကောင်းလှပါတယ်။ ကလေးတွေကို ကလေးပဲ သူ့ဘာသာသူ ဇလုံနဲ့ထည့်ပေးပြီး တစ်နေရာမှာ စားပလေ့စေ ဆိုပြီးတော့ စားခိုင်းတာ ထက် ကိုယ်နဲ့အတူတူ ထမင်းဝိုင်းမှာ တစ်ခါတည်း ၀င်စားခိုင်းက ပိုကောင်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ထမင်းဝိုင်းမှာ ကလေးကို ထမင်းစားပွဲရဲ့ ယဉ်ကျေးဖွယ်များကို စားရင်းသောက်ရင်းနဲ့ တစ်ခါတည်း သင်ကြားပေးခွင့်ရလို့ပါပဲ။ ထမင်းစားတိုင်းစားတိုင်းမှာပဲ ကလေးတို့ကို သင်ကြားပေးဖို့ အခွင့်အရေးတွေရ နေတာကိုး။ စားတာသောက်တာ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ဖို့ဆိုတာလည်း လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲဝင်မယ့် လူကလေးများအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အရာပါပဲ။ကိုယ်နဲ့ ထမင်းအတူတူစားနေတဲ့ လူတွေ စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဖို့၊ စိတ်ပျက်မသွားဖို့အတွက် လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ စောင့်စည်း ကျင့်ကြံရမယ့် ထမင်းဝိုင်းစည်းမျဉ်းတွေက လူမျိုးတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့လို လက်နဲ့ ထမင်းစားတတ်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေဆိုရင် လက်ခုံပေါ်ထိ ထမင်းတွေဟင်းတွေပေပွနေအောင် မစားဖို့၊ သေသပ်စွာ စားတတ်ဖို့ ကလေးတို့ကို သင်ကြားပေးကြရပါမယ်။ဟင်းကို လူကြီးတွေပန်းကန်ထဲ အရင်ဦးချဖို့လည်း တစ်ခါတည်းသင်ကြားပေးရပါမယ်။ ကိုယ့်ရှေ့မှာ ဟင်းပန်းကန်ရှိနေရင် ကိုယ်ချည်းပဲ ဟင်းကို ခပ်မစားပဲ ဝေးတဲ့သူတွေကို ဟင်းပန်းကန် လှမ်းပေးဖို့လည်းသင်ကြားပေးရပါမယ်။ ကိုယ်စားနေတဲ့ ပါးစပ်ထဲက ထမင်းကို တခြားလူတွေ မမြင်အောင် ပါးစပ်ကို စေ့ပြီးတော့ အစာဝါးစားဖို့နဲ့ ထမင်းလုတ်ကြီး ပါးစပ်ထဲရှိနေချိန်မှာ စကားမပြောဖို့ ဆိုတာတွေက ထမင်းအတူတူ စားရင်းသောက်ရင်းနဲ့ ကလေးတို့ကို သင်ကြားပေးရမယ့် ယဉ်ကျေးဖွယ်ရာ အပြုအမူတွေပါပဲ။ နောက်တခုကတော့ ကျွန်မတို့လူမျိုးများမှာ အင်မတန်မှ အလေ့အထနည်းတဲ့ အကျင့်လေးပါ။ အနောက်တိုင်းမှာတော့ ကျင့်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မကတော့ သဘောကျတာမို့ ယဉ်ကျေးဖွယ်ရာများထဲမှာ ချန်မထားခဲ့ပဲ ထည့်တားပါတယ်။ အဲဒါ ...
မိဘတွေဟာသားသမီးတွေတော်ဖို့၊ ကောင်းဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စည်းကမ်းစနစ်ဇယားတွေကို ချမှတ်ပေးတတ်ကြပါသည်။ အဲဒီလိုစည်းကမ်းတွေချမှတ်ပေးလိုက်တဲ့ မိဘတွေက အဲ့ဒီစည်းကမ်းတွေအပေါ်မှာ ဘယ်လောက်အရေးထားလဲ၊ ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားသလဲဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး ဒီစည်းကမ်းကို ကလေးတွေလိုက်နာ၏ မလိုက်နာ၏ဆိုတာကွဲပြားသွားကြပါတယ်။ ၁။ ပထမချက်အနေဖြင့် ကိုယ်ကကလေးတွေအတွက် စည်းကမ်းတွေသက်မှတ်ပေးလိုက်မယ်။ ခဏကြာတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပဲ အဲဒီစည်းကမ်းတွေကို လစ်လျူရှုလိုက်ပြန်တယ်ဆိုရင် ကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေရှိနေမယ်ထင်ပါသလဲ။ ဥပမာဆိုကြပါစို့ကိုယ်ကလေးတွေကို ကျောင်းဖွင့်ရက်တွေမှာ TVလုံးဝမကြည့်ရဘူးလို့ စည်းကမ်းထုတ်ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ကျောင်းဖွင့်ရက်တွေမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် TV ကြည့်ခွင့်ပေးလိုက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်စည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဇဝေဇ၀ါဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကြာလာရင် ဇဝေဇ၀ါဖြစ်ရုံမကပဲ ကိုယ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စည်းကမ်းတွေကို အရေးမလုပ်၊ တန်ဖိုးမထားတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ကလေးတွေကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့။ ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာက ကလေးတွေမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ကိုတိုင်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ၂။ ဒုတိယတစ်ချက်က မိဘနှစ်ဦးနဲ့ကလေးတွေရဲ့ ကြားထဲမှာလည်း စည်းကမ်းဟာ တစ်သတ်မတ်တည်းဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူကထုတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းကိုမိခင်ကလည်းလေးစားတန်ဖိုးထားဖို့လိုပါတယ်။အဖေကစည်းကမ်းထုတ်ထားပါရဲ့၊ ဒါပေမဲ့အမေဖြစ်သူက အဖေထုတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းကို လစ်လျူရှုပြီး သားသမီးကိုချစ်တဲ့ဇောနဲ့ လိုက်လျောခဲ့မယ်ဆိုရင် အဖေထုတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းဟာ တန်ဖိုးရှိနိုင်ပါဦးမလား။ အဖေအပေါ်မှာရော သားသမီးတွေရဲ့လေးစားတန်ဖိုးထားစိတ်က ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။ မိခင်နဲ့ဖခင်ကြားကွာဟချက်ရှိနေတဲ့ ဇနီးမောင်နှံများစဉ်းစားကြဖို့ပါ။ ကြာလာရင်ကလေးတွေဟာ အဖေနဲ့အမေကြားမှာ စည်းကမ်းတွေကို အမျိုးမျိုးကစားသွားပြီး သူတို့လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံ လုပ်သွားကြပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် သူတို့ရဲ့အပြစ်ကို အဖေ၊ သို့မဟုတ် အမေအပေါ်ကို ပုံချသွားပါလိမ့်မယ်။ အမေကပြောရင် `ဒါအဖေသိတယ်`၊ အဖေကဆူရင် `ဒါအမေ့ကိုပြောပြီးလုပ်တာ`ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ၃။ တတိယအချက်ကတော့ သားသမီးတွေအားလုံးအပေါ်မှာလည်း တစ်သမတ်တည်းဖြစ်နေလို့ပါ။ ဥပမာ သားသမီး ၃ယောက်နဲ့ မိဘတွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းကလေးတွေရဲ့ အဘိုးအဘွားတွေရဲ့အိမ်ကိုသွားကြမယ်လို့စည်းကမ်းထုတ်ထားတယ်ဆိုပါစို့။ အဲဒီလိုဆိုရင် တနင်္ဂနွေနေ့ရောက်တိုင်းသားသမီးသုံးယောက်ဟာ တခြားသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်တွေဘယ်လောက်ပဲရှိရှိအဖေအမေ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့အတူ အဘိုးအဘွားတွေရဲ့ အိမ်ကိုလိုက်ကိုလိုက်ခိုင်းရမယ်။ ဒီထဲမှာ ကလေးတစ်ယောက်ကဒီနေ့တော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ချိန်းထားလို့ ...
မိဘအများစုဟာ အိမ်မှာ ကိုယ့်သားသမီးရဲ့ လှုပ်ရှားသွားလာမှု၊စားမှု သောက်မှု စသည်တို့မှာ ချွတ်ယွင်း ချက် တစ်စုံတစ်ရာ ရှိနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျောင်းမှာ စာမလိုက်နိုင်တာ၊ တခြားကလေးတွေလို သွက်သွက်လက်လက် ထက်ထက် မြက်မြက် မရှိဘဲ စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကအစ သာမန်ကလေးတစ်ယောက်ထက် ထိုင်းမှိုင်းနေတာမျိုးတွေတွေ့ရင် သားသမီးရဲ့ အိပ်စက်အနားယူချိန်နဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်စနစ်အပေါ်မှာ မူတည်စဉ်းစား တာ တွေဟာ လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာ သိရပါမယ်။ ကျောင်းမှာ၊ အိမ်မှာ တစ်နေကုန် ကစားခုန်စား လှုပ်ရှားသွားလာပြုလုပ်ထား တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဟာတစ်နေ့တာကုန်ခမ်း သွားတဲ့ သူ့ရဲ့အားအင်တွေ၊ စွမ်းရည်တွေကို ပြန်လည်ဖြည့် တင်းဖို့ အတွက် အနှောင့်အယှက်ကင်းကင်းနဲ့ ပြည့်ပြည့်၀၀ အနားယူအိပ်စက်ဖို့ လိုအပ်လှ ပါတယ်။ ဒီလိုအနားယူခြင်းဟာ သားသမီးတို့ ဘ၀တစ်လျှောက် တို့တက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် ထိရောက်မှုရှိလှတဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခုပါပဲ။ ကလေးများအိပ်ရေးမ၀ရခြင်းအကြောင်းမှာ အမျိုးမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ကလေးရဲ့ ပင်ကိုစရိုက်ဖြစ်သလို မိဘမျိုးရိုးကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာရှိနေတာမျိုး (ဥပမာ-ဟောက်ခြင်းကလည်း အိပ်စက်ခြင်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာအနေနဲ့ စိတ်တို၊စိတ်ဆတ်ခြင်း၊ ဒေါသကြီး စ်ိတ်ကောက်တတ်ခြင်းတွေဟာလည်း အိပ်စက်တဲ့အချိန်နဲ့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်ခြင်းကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က အိပ်ရေးမ၀တဲ့ကလေးဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အနှောင့်အယှက်အမျိုးမျိုးပေးပြီးပြဿနာရှာတတ်တဲ့ကလေး တစ်ယောက် ဖြစ် လာနိုင်လို့ပါပဲ။ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အိပ်ချိန်ဟာ ဘယ်လောက် လိုအပ်သလဲဆိုတာကတော့ ကာယကံရှင်အပေါ်မှာအတိအကျ မူတည်နေပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကတော့ မူကြိုအရွယ်မှာ အိပ်ချိန်၁၁/၁၂ နာရီလောက်ရှိပါမယ်။ မူလတန်းအရွယ်ဆိုရင်တော့အိပ်ချိန်၁၀ နာရီဖြစ်ပြီး၊ ၁၀နှစ်ကနေ ၁၆ နှစ်အတွင်းကတော့ အိပ်စက်ချိန် ၉း၀၀ နာရီ နဲ့ ၉း၃၀ နာရီ အိပ်စက်ပေးရပါ မယ်။ ...
ရင်သွေးငယ်များ၏ တစ်နေ့တာ သာယာပျော်ရွှင်စေဖို့ ပူးပေါင်းကြပါစို့
ကျောင်းကိုရောက်လာတဲ့ ကလေးတွေဟာ စိတ်အနေအထားအမျိုးမျိုးနဲ့ ရောက်လာကြပါတယ်။ ကလေးများကို ကျောင်းလာပို့တဲ့ အခါမှာဖြစ်စေ၊ ပြန်ကြိုတဲ့ အခါမှာ ဖြစ်စေ မိဘများအနေနှင့် မိမိတို့ကလေးများနှင့်အတူ အချိန်အနည်းငယ်ခန့်သက်တောင့်သက်သာ နေပေးသင့်ပါသည်။ ဒီလိုစောင့်ပေးနေတဲ့ အချိန်မှာ ဆိုလျှင် ဆ၇ာမများနှင့် စကားပြောခြင်း ၊ ကလေးနဲ့အတူ ကစားခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်၊ အိမ်ကနေကျောင်း အကူးအပြောင်းဟာ ကလေးများအတွက် စိတ်သက်သာမှုရစေပါတယ်။ ကလေးစိတ်သက်သာမှု ရတဲ့အချိန်မှာ ကျောင်းဆင်းလျှင်လာကြိုပါမည် ဆိုတာ သေချာပြောပြပေးပါ ၊ နှုတ်ဆက်အနမ်းလေးပေးပြီး မြန်မြန်လေးပြန်ထွက်ရန်တော့လိုပါသည် ။ ကျောင်းကိုခဏလောက်ဝင်လိုက် ထွက်လိုက် လုပ်တာဟာ ၊ ကလေးများအတွက် စိတ်ပူပင်သောက ပိုရောက်စေပါတတ်ပါတယ်။ ကျောင်းမှာ အချိန်တွေအကြာကြီး လာနေရင်လည်း ကလေးက မိဘကိုသာ တွယ်နေတာမျိုး ဖြစ်လာစေတတ်သဖြင့် ကလေးအတွက်ရော ၊ မိဘ အုပ်ထိန်းသူတွေအတွက်ပါ ပိုပြီး စိတ်သောကရောက်ရပါမည်။ မိဘများ၊ အုပ်ထိန်းသူများအနေနှင့် ကလေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ အချိန်တွင် ကလေးကိုအသာလေးဖတ်ရင်း (ကျောင်းမှာ ရှိတဲ့ ဆရာ / မ များက ကလေးကျောင်းလာတဲ့အတွက် သိပ်ဝမ်းသာကြောင်း ၊ချစ်ကြကြောင်း၊ သူငယ်ချင်းများကလည်းစောင့်နေမှာဖြစ်ကြောင်း) ပြောပြပေးခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးလို့ရပါတယ်။ အိမ်မှကျောင်းပို့တဲ့အချိန်မှာလဲ ကလေးစိတ်သက်သာမှုရစေရန် အိမ်မှ ကလေးနှစ်သက်တဲ့ ကစားစရာ တစ်ခုခုကို ကျောင်းသို့ယူလာပါစေ သို့မဟုတ် ကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာ မိမိနှင့် အိမ်ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ခံစားမှုဖြစ်စေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခု ၊ မိမိနှင့် မိဘဆက်စပ်နေတယ်လို့ ခံစားမှုဖြစ်စေတဲ့ ပစ္စည်းလေးတစ်ခုခု မျိုးကို ကျောင်းသို့ ယူသွားစေမည်ဆိုလျှင် ကလေးများ၏မိဘနဲ့ခွဲခွာရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ပူပင်သောကရောက်မှုတွေ ကို သက်သာစေနိုင်ပါသည်။ မိဘများ မိမိတို့ ပြန်ချိန်ရောက်လျှင် အခုအချိန်ဟာ ...
အစာသိပ်ရွေးတဲ့ကလေးများကို စတင်ကျွှေးတဲ့အခါမှာ အစာနည်းနည်းသာ ထည့်ပေးပါ။ နည်းနည်းစီထပ်ထည့်ပေးပြီးစားစေတာဟာ အစာတွေအများကြီးထည့်ပြီး စားစေတာ လောက် စိတ်အနှောက်အယှက် မဖြစ်ပါ။ အစာစားနေချိန်မှာ အစားအစာ အသစ်တစ်ခုခုကိုစတင်စားရတာဟာ ကလေးတေါအတွက် ကြည့်လိုက်ရင် မကောင်းဘူးလို့ ထင်၇တဲ့အစာတွေကို စတင်စားရတာ မလွယ်ကြောင်း ကလေးကို ပြောပြပေးပါ ။ ကျွေးထဲကအစားအစာသစ်ကို စားကြည့်တဲ့အတွက် အစားအစာအသစ်ကို စားရဲတဲ့ သတ္တိကို ချီးကျူးပါ ၊ အသိအမှတ်ပြုပေးပါ။ ဘယ်ကလေးကိုမှ အစားအစာတစ်ခုခုကို စားရန်ထိအားပေးခိုင်းတာမျိူး ၊ ကျွေးတာမျိုး လုံးဝ မလုပ်ပါနဲ့ ။ စားစေချင်တာကို ချိုချိုသာသာ ၊ အေးအေးသာသာ ပြောပါ ။ ကောင်းတဲ့ စားသောက်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကို နမူနာပြပါ ။ အစားစားချိန်တွင် ကလေးများ ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးပါ ။ ( ဥပမာ ။ ။ စားစရာမျးကို သူတို့လေးတွေကိုယ်တိုင်ထည့်စေခြင်း ၊ သူတို့လေးတွေ အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှ စားစေခြင်း ၊ ဝသွားပါက စားစေတဲ့လုပ်ငန်း ပြီးစေခြင်း ) တို့ လုပ်ဆောင်ပေးပါ ။ တချို့ကလေးများအစားကို ရွေးတယ်ဆိုတာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ ကလေးများသာမက လူကြီးတွေလည်း အစားအစာဟာ စားချင်စရာ မကောင်း တဲ့အစာတွေကို သိနေကြပါတယ် ။ အစားချင်ကြပါဘူး ။ ထို့ကြောင့် ကလေးများစာချင်စရာဖြစ်စေမည့် မိမိတို့ကလေးများအတွက်လည်း အဟာရမျှတ စေမည့် အစားအစားများ နှင့် လက်ဆတ် သန့်ရှင်းပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားကောင်းမွန်သော အစားအစာများ ကျွေးခြင်းဟာ ကလေးများကို အမှန်တကယ် ...
သင့်ကလေးငယ် ကျောင်းသွားတဲ့အခါ ထမင်းဘူးနဲ့အတူဘာစားစရာတွေထည့်ပေးကြမလဲ?
သင့်ကလေးငယ် ကျောင်းသွားတဲ့အခါ ထမင်းဘူးနဲ့အတူဘာစားစရာတွေထည့်ပေးကြမလဲ? အခုဆိုရင် နွေဥတုအကုန်မို့ မိုးတွင်းကိုကူးပြီဆိုတဲ့အခါ ကျောင်းဖွင့်ရာသီကိုရောက်ရှိလာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်မေမေတို့အနေနဲ့ သားသားမီးမီးတို့ကို နေ့ခင်းဘက်ကိုအိမ်မှာပဲ ထမင်းဟင်းနဲ့ မုန့်ပဲသွားရည်စာတွေကျွေးနေရင်းကနေ ထမင်းဘူးနဲ့ မုန့်ဘူးထည့်ပေးရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သားသားမီးမီးတို့အတွက် သင့်တော်ရာ နေ့ခင်းနေ့လည်သွားရည်စာတွေကိုရွေးချယ်တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ ထမင်းဘူးဘေးက မုန့်ဘူးလေး ဘာတွေရွေးပြီးထည့်ကြမလဲ? လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံများ ရာသီအလိုက် စတော်ဘယ်ရီ၊ လိမ္မော်သီး၊ စပျစ်သီး၊ ငှက်ပျောသီး အစရှိတဲ့ အသီးအနှံလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေဟာ ဗီတာမင်များစွာပါဝင်တဲ့အတွက် ကလေးငယ်ကိုကိုယ်ခံအားတက်စေပါတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာမုန့်များ သန့်ရှင်းစွာပြုလုပ်ထားတဲ့မြန်မာမုန့်တွေဟာ အရသာလဲရှိ အားအင်လည်းဖြစ်စေတာမို့ ကလေးငယ်တွေအတွက်သင့်တော်တဲ့ သွားရည်စာတစ်မျိုးတစ်ဖုံအနေနဲ့ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ နွားနို့၊ ပဲနို့ နှင့် ဒိန်ချဉ် နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေဟာ ကယ်လစီယမ်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့အတွက်ကြောင့် ကလေးတွေရဲ့အရိုးကိုသန်မာစေပြီး အရပ်ရှည်မှုကိုအားပေးပါတယ်။ ပေါင်မုန့်၊ ဆင်းဒဝစ်၊ နှင့် ဂျုံမှလုပ်သောမုန့်အမျိုးမျိုး ပေါင်မုန့်ဟာ အာဟာရကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်အတွက် အားအင်ဖြစ်စေတာကြောင့် အသားညှပ်၍ဖြစ်စေ၊ ယိုသုတ်၍ဖြစ်စေ၊ သူ့ချည်းဖြစ်စေ ကျွေးနိုင်ပါတယ်။ ရေ နောက်ဆုံးမပါမဖြစ်ကတော့ ရေဘူးတစ်ဘူးပါပဲ။ ဘယ်လောက်ပဲအစားတွေစားပါစေ ကလေးငယ်အတွက် သောက်စရာရေတစ်ဘူး ပါရပါမယ်။ခန္ဓာကိုယ်နှအဆိပ်အတောက်တွေကို ဆီးအဖြစ်စွန့်ထုတ်ဖယ်ရှားဖို့ဖြစ်စေ၊ လန်းဆန်းတက်ကြွဖို့အတွက်ပဲဖြစ်စေတစ်နေ့တာ သောက်သုံးရမယ့်ရေပမာဏကို ဝဝလင်လင်သောက်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘာတွေမကျွေးသင့်ဘူးလဲ? အချိုရည်ဗူးများ အထူးသဖြင့် ခွန်အားဖြည့်အချိုရည်များ၊ အဆီအနှစ်ဖြင့်ဖျော်သောအချိုရည်များဟာ သကြားလွန်ကဲစွာပါဝင်ခြင်း၊ ကလေးများနှင့်မသင့်တော်သောဓာတ်များပါဝင်ခြင်းတို့ကြောင့် ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ အချိုခဲ၊ အချိုတောင့်၊ သကြားလုံး၊ ချောကလက် ဒီစားစရာတွေဟာ အချိုပါဝင်မှုများပြီး ကလေးကိုသွားပိုးစားစေနိုင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စပျစ်သီးခြောက်၊ ဇီးထုပ်၊ အချဉ်ပြားများ ကြာရှည်အထားခံ ဓာတုပစ္စည်းများဖြင့် စီမံထားတဲ့အစားအစာများကို ကလေးများနးမစားသုံးမိအောင် ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ အမှည့်လွန်အသီးအနှံများ၊ ဆီများသော အီသောအစားအစာများ၊ အချဉ်ရည်နှင့်တို့စားရသောအစားအစာများ ကိုလည်း မိုးရာသီမှာ ဝမ်းရောဂါဖြစ်လွယ်တဲ့အတွက် ဂရုစိုက်ဆင်ခြင်ပြီး ...
ကလေးမျက်ခုံးထူအောင် ကွမ်းရိုးနဲ့ ဆွဲပေးသင့်သလား ?
ကလေးမျက်ခုံးထူအောင် ကွမ်းရိုးနဲ့ ဆွဲပေးသင့်သလား ? “ဟဲ့ ကလေးလေးက မျက်ခုံးလေးတွေ ပါးလိုက်တာ..ကွမ်းရိုးလေးနဲ့ ဆွဲပေးလေ”ဟူသော စကားသံမျိုးကို မိဘတော်တော်များများ ကြားဖူးကြမှာပါ။ ခေတ်ပေါင်းများစွာ လက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင်လာခဲ့ကြသည့် ရှေးမြန်မာတို့၏ ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနည်းလမ်းများက မှန်ကန်သင့်တော်တာတွေရှိသလို ယနေ့ခေတ်ဆေးသိပ္ပံပညာအမြင်နှင့် မလျော်ကန်တာတွေလည်းရှိ၏။ အချို့က သေချာပေါက်ဘေးဖြစ်စေသော်လည်း အချို့ကား သိသိသာသာ အကျိုးဖြစ်စေ၏။ အချို့မှာကား ဘေးမဖြစ်စေသော်လည်း အကျိုးတစုံတရာ ဖြစ်ထွန်းမည်မဖြစ်ထွန်းမည် မသေချာ။ ကွမ်းရိုးနှင့် မျက်ခုံးမွှေးဆွဲပေးခြင်းသည် အထက်ပါ တတိယအုပ်စုတွင်ပါဝင်၏။ အန္တရာယ် မဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း အမှန်တကယ် အကျိုးဖြစ်မဖြစ် လေ့လာထားသော သုတေသနစာတမ်းများမူ နိုင်ငံတကာတွင်လည်း မတွေ့ရ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း မရှိသေးပေ။ “မျက်ခုံးဘာလို့ ထူချင်ကြတာလဲ” မည်သူမဆို ‘လှချင်လို့’ ဟုသာ ဖြေမည် မုချ။ မိဘတိုင်းမိမိသားသမီးကို မျက်လုံးမျက်ခုံး လှစေချင်သည်။ မျက်ခုံးထူထူလေးဖြစ်စေချင်သည်။ မျက်ခုံးထူထူလေးတစ်ခုက မျက်နှာလှလှလေးတစ်ခုဖြစ်ဖို့ အကောင်းဆုံး ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်မဟုတ်လား။ မျက်ခုံးထူထူလေးတစ်ခုကြောင့် ပိုလှပချောမောစေသလို ၎င်း၏ အဓိကတာဝန်ဖြစ်သော မျက်လုံးကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့် ချွေး၊အမှုန်အမွှား၊ နေပူဒဏ်တို့မှလည်း အထိုက်အလျောက် ကာကွယ်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်၏။ အချို့ကား မျိုးရိုးဗီဇအရ သဘာဝ၏လက်ဆောင်အဖြစ် မျက်ခုံးမွှေးထူထူလေး ပါလာကြသော်လည်း အချို့အတွက်တော့ မျက်ခုံးမွှေးကံကြမ္မာကား ကျိုးတိုးကျဲတဲ။ မည်သည့်အရာမဆို သဘာဝအတိုင်းသာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် မှန်သော်လည်း မိဘ၏ မေတ္တာနှင့် လှစေချင်စိတ်က သဘာဝတရားကို အံတုသာလွန်ချင်လာသောအခါ ကလေးလေး ပိုချောပိုလှဖို့ရာ ကြိုးစားကြလေသည်။ နှာတံလေးပေါ်အောင် ပုံသွင်းတတ်ကြသလို မျက်ခုံးမွှေးကိုကွမ်းရိုးနှင့်ဆွဲပေးကြ၏။ နိုင်ငံတကာတွင်တော့ အခြားနည်းလမ်းများသုံးကြသော်လည်း မြန်မာ့ရိုးရာတွင်မူ ကွမ်းရိုးဆွဲသည့် ဓလေ့သာလူသိများ၏။ ”ကွမ်းရိုးနဲ့မျက်ခုံးဆွဲပေးရင် ကလေးမျက်ခုံး တကယ်ထူလာမှာလား” မျက်ခုံးတကယ်ထူမထူထက် ...
ရိုက်နှက်ခံပြီး ကြီးပြင်းလာရတဲ့ကလေးတွေဟာ ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ ?
ရိုက်နှက်ခံပြီး ကြီးပြင်းလာရတဲ့ကလေးတွေဟာ ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလ ??? ( အချိန် ၂ မိနစ်ပေးပြီး ဖတ်ပေးပါ ) ----------------------------------------------------- အရွယ်ရောက်နေတဲ့လူငယ် ၈ဝဝ လောက် ကို လေ့လာကြည့်တော့ ငယ်စဉ်တည်းက အရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ ကလေးတွေဟာ ကြီးလာရင် ပိုမိုကြမ်းကြုတ်ရိုင်းစိုင်းလာကြောင်း Texas ဆေးတက္ကသိုလ်မှတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငယ်စဉ်တည်းက အရိုက်ခံခဲ့ရတော့ အမှားတစ်ခုခုလုပ်မိရင် ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်အောင်လုပ်မှ ပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ သူတို့စိတ်ထဲမှာ စွဲမြဲသွားတတ်ကြတယ်။ ဒီစိတ်အစွဲကြောင့် လူဟာအရွယ်ရောက်လာလေ ပိုမိုကြမ်းကြုတ်လေဖြစ်ပြီး မိဘနဲ့သားသမီးကြားပိုမိုရှုပ်ထွေးတဲ့ ဆက်ဆံတွေရေးတွေသာ ရှေ့လျှောက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ တစ်ခုခုအမှားလုပ်မိရင် သင်ခန်းစာယူတတ်အောင် လမ်းမပြပေးပဲ ကလေးကို ရိုက်နှက်ဖို့သာ တာဆူနေတဲ့မိဘတွေကြောင့် ကလေးရဲ့အနာဂတ်ဟာ မလှပတော့ဘူး။ အသက် ၁၉နှစ်နဲ့ ၂ဝ ဝန်းကျင်ကြားက လူငယ်လေးတွေ၊ အထူးသဖြင့် ကျောင်းမှာ မကြာခဏ ရန်ဖြစ်လို့ ဒဏ်ပေးခံရ၊ မိဘအခေါ်ခံရတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုပေါ့… သုတေသီတွေက မေးခွန်းလေးတွေထုတ်ကြည့်ခဲ့တယ်။ သူတို့ငယ်စဉ်ဘဝမှာ အရိုက်ခံခဲ့ရတာ ၆၈ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေတာတွေ့ရတယ်။ ဒီလိုမျိုးဝုန်းဒိုင်း ကြဲပြီး ပြဿနာဖြေရှင်းလိုက်လို့ သူတို့မှာ နောင်တရခြင်းလည်းမရှိဘူး။ တစ်ဖက်မှာ ဘယ်လောက်ထိနစ်နာသွားမလဲ.. ဒါတွေထည့်မတွက်တတ်တော့ဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်ကို နာကျင်အောင်လုပ်လိုက်မှသာ သူတို့စိတ်ဖိစီးနေတာတွေလျော့ကျသွားမယ်လို့ တွေးထင်လာကြတယ်။ နောက်ပြီး ကလေးကို ခါးပတ်နဲ့ရိုက်တဲ့အကျင့်။ အခန့်မသင့်လက်လွန်သွားရင် အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ အခြားကလေးတွေနဲ့ယှဉ်ရင်သူတို့ စိတ်ထဲအားငယ်နေရတတ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုအဆင်မပြေဖြစ်တိုင်း မိဘကို ရင်မဖွင့်ရဲတော့ဘူး။ စိတ်ထဲ သိမ်းဆည်းထားများပြီး မွန်းကြပ်လာမယ်။ နောက်ဆုံး ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတွေနဲ့ အတွေးတွေနောက်ကျိလာတော့တယ်။ အနာဂတ်ကြယ်ပွင့်လေးတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ရာမှာ နည်းစနစ်ကျမှန်ကန်ဖို့လိုပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့များစွာသော လုပ်ငန်းတွေမှာ သူတို့တစ်ချိန် ဦးမဆောင်နိုင်ဘူးလို့ ဘယ်ပြောလို့ရမလဲ? ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက အချို့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ပြင်သစ်၊ဆွီဒင် ...
အခုဆိုရင် နွေဥတုအကုန်မို့ မိုးတွင်းကိုကူးပြီဆိုတဲ့အခါ ကျောင်းဖွင့်ရာသီကိုရောက်ရှိလာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်မေမေတို့အနေနဲ့ သားသားမီးမီးတို့ကို နေ့ခင်းဘက်ကိုအိမ်မှာပဲ ထမင်းဟင်းနဲ့ မုန့်ပဲသွားရည်စာတွေကျွေးနေရင်းကနေ ထမင်းဘူးနဲ့ မုန့်ဘူးထည့်ပေးရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သားသားမီးမီးတို့အတွက် သင့်တော်ရာ နေ့ခင်းနေ့လည်သွားရည်စာတွေကိုရွေးချယ်တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ ထမင်းဘူးဘေးက မုန့်ဘူးလေး ဘာတွေရွေးပြီးထည့်ကြမလဲ? လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံများ ရာသီအလိုက် စတော်ဘယ်ရီ၊ လိမ္မော်သီး၊ စပျစ်သီး၊ ငှက်ပျောသီး အစရှိတဲ့ အသီးအနှံလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေဟာ ဗီတာမင်များစွာပါဝင်တဲ့အတွက် ကလေးငယ်ကိုကိုယ်ခံအားတက်စေပါတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာမုန့်များ သန့်ရှင်းစွာပြုလုပ်ထားတဲ့မြန်မာမုန့်တွေဟာ အရသာလဲရှိ အားအင်လည်းဖြစ်စေတာမို့ ကလေးငယ်တွေအတွက်သင့်တော်တဲ့ သွားရည်စာတစ်မျိုးတစ်ဖုံအနေနဲ့ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ နွားနို့၊ ပဲနို့ နှင့် ဒိန်ချဉ် နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေဟာ ကယ်လစီယမ်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့အတွက်ကြောင့် ကလေးတွေရဲ့အရိုးကိုသန်မာစေပြီး အရပ်ရှည်မှုကိုအားပေးပါတယ်။ ပေါင်မုန့်၊ ဆင်းဒဝစ်၊ နှင့် ဂျုံမှလုပ်သောမုန့်အမျိုးမျိုး ပေါင်မုန့်ဟာ အာဟာရကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်အတွက် အားအင်ဖြစ်စေတာကြောင့် အသားညှပ်၍ဖြစ်စေ၊ ယိုသုတ်၍ဖြစ်စေ၊ သူ့ချည်းဖြစ်စေ ကျွေးနိုင်ပါတယ်။ ရေ နောက်ဆုံးမပါမဖြစ်ကတော့ ရေဘူးတစ်ဘူးပါပဲ။ ဘယ်လောက်ပဲအစားတွေစားပါစေ ကလေးငယ်အတွက် သောက်စရာရေတစ်ဘူး ပါရပါမယ်။ခန္ဓာကိုယ်နှအဆိပ်အတောက်တွေကို ဆီးအဖြစ်စွန့်ထုတ်ဖယ်ရှားဖို့ဖြစ်စေ၊ လန်းဆန်းတက်ကြွဖို့အတွက်ပဲဖြစ်စေတစ်နေ့တာ သောက်သုံးရမယ့်ရေပမာဏကို ဝဝလင်လင်သောက်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဘာတွေမကျွေးသင့်ဘူးလဲ? အချိုရည်ဗူးများ အထူးသဖြင့် ခွန်အားဖြည့်အချိုရည်များ၊ အဆီအနှစ်ဖြင့်ဖျော်သောအချိုရည်များဟာ သကြားလွန်ကဲစွာပါဝင်ခြင်း၊ ကလေးများနှင့်မသင့်တော်သောဓာတ်များပါဝင်ခြင်းတို့ကြောင့် ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။ အချိုခဲ၊ အချိုတောင့်၊ သကြားလုံး၊ ချောကလက် ဒီစားစရာတွေဟာ အချိုပါဝင်မှုများပြီး ကလေးကိုသွားပိုးစားစေနိုင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စပျစ်သီးခြောက်၊ ဇီးထုပ်၊ အချဉ်ပြားများ ကြာရှည်အထားခံ ဓာတုပစ္စည်းများဖြင့် စီမံထားတဲ့အစားအစာများကို ကလေးများနးမစားသုံးမိအောင် ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ အမှည့်လွန်အသီးအနှံများ၊ ဆီများသော အီသောအစားအစာများ၊ အချဉ်ရည်နှင့်တို့စားရသောအစားအစာများ ကိုလည်း မိုးရာသီမှာ ဝမ်းရောဂါဖြစ်လွယ်တဲ့အတွက် ဂရုစိုက်ဆင်ခြင်ပြီး ရှောင်ကျဉ်ကျွေးသင့်ပါတယ်လို့ တင်ပြလိုက်ပါရစေ။ သားသားမီးမီးတို့ ...
Article Ebook Download ဆှဲလိုသူမြားအတှကျ အောကျပါ Download Click Here အားနှိပျပေးပါ။
သငျတနျးအကွောငျးအသေးစိတျသိရှိလိုပါက အောကျပါ Inquiry Form တှငျထညျ့သှငျးဖွညျ့စှကျပေးပါ။
သငျတနျးအကွောငျးအသေးစိတျသိရှိလိုပါက နာမညျ၊ ဖုနျးနံပါတျ၊ နထေိုငျသညျ့ မွို့နယျအား ဖောငျတှငျ သခြောမှနျကနျစှာဖွညျ့စှကျပေးပါ။ Customer Service Team အဖှဲ့မှ ပွနျလညျဆကျသှယျ၍ သငျတနျးအကွောငျး အသေးစိတျရှငျးပွပေးပါမညျ။